चरण दर चरण ट्यूटोरियल: एडोब इलस्ट्रेटरमा हास्य पाठ प्रभाव क्रिएटिव अनलाइन
लुआ लौरो | | Illustrator, ट्यूटोरियलहरू
सबैभन्दा पहिले, यसलाई स्पष्ट पार्नुहोस् ट्युटोरियल यो एडोब इलस्ट्रेटर CS5 (अ in्ग्रेजीमा) बाट बनाइएको छ, त्यसैले चरण-देखि-चरण छविहरूले संस्करणको इन्टरफेस देखाउँदछ। तैपनि, तपाईं यसलाई कुनै पनि संस्करणमा यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, यो ध्यानमा राख्दै कि यो सम्भाव्य छ कि यो ट्यूटोरियल अनुसरण गर्न तपाईंलाई अलि बढी खर्च लाग्नेछ।
यो प्रभाव एक प्रदर्शन गर्दा उपयोगी हुन सक्छ अनौपचारिक डिजाइन जसमा हास्य शैली तपाइँसँग कुराकानी गर्न चाहानुहुन्छ। तल हामी तपाईंको लागि चरण-देखि-चरण ट्यूटोरियल ल्याउँछौं ताकि तपाईं एडोब इलस्ट्रेटरको साथ हास्य पाठ प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
1 हास्य पाठ प्रभाव
1.2 पृष्ठभूमि रंग
1.6 शैली थप्दै
हास्य पाठ प्रभाव
हामी एडोब इलस्ट्रेटर खोल्छौं र जाऔं नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस् (म्याक: Cmd + N विन्डोज: Ctrl + N)। हामी यसको नाम जुन हामी चाहान्न सक्छौं र फाईल आकार छान्न सक्छौं। मेरो केसमा मैले 570० x p०० px छनौट गरेको छ, छविहरू अपलोड गर्न हामीले क्रिएटिभोस अनलाइनमा प्रयोग गर्यौं।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि, (उन्नत) संवाद बाकसको तल, तपाईंले रंग र Color्ग मोडको रूपमा चिन्ह लगाउनुभएको छ भनि निश्चित गर्नुहोस् RGB, रास्टर प्रभावहरू स्क्रिन (p२ पीपीआई) y पूर्वावलोकन मोड पूर्वनिर्धारित। एकचोटि तपाईले छनौट विकल्पहरू, ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी रंगीन पृष्ठभूमि सिर्जना गर्न गइरहेका छौं जुन हाम्रो पाठले लगाउँदछ। हामी आयत उपकरण (आयत उपकरण, M कुञ्जी) चयन गर्दछौं र हामी हाम्रो कागजातको जहाँसुकै क्लिक गर्दछौं। त्यसो भए एउटा सानो विन्डो खुल्नेछ जसले हामीलाई आयतको उपायहरू प्रविष्ट गर्न अनुमति दिनेछ: तपाईंले आफ्नो कागजातको उपायहरू राख्नुपर्नेछ। मेरो केसमा, 570० x p००px। ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस् र आयत जुन हामीले भर्खर सिर्जना गरेका छौं स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
अब हामी यसलाई राम्रोसँग राख्नु पर्छ। यो गर्न हामी टुलबारमा भएको कालो एरो छान्नेछौं, (छनौट उपकरण, V कुञ्जी)। यसको साथ हामी आयतको बोर्डरमा क्लिक गर्नेछौं र जारी नगरी हामी किनारा ड्र्याग गर्दछौं जबसम्म यो कागजातको किनारसँग मिल्दैन।
पृष्ठभूमि पहिले नै समाप्त भइसक्यो, तर पूर्वनिर्धारित रूपमा हामी यसलाई कालो किनारिको साथ सेतो देख्नेछौं। यसलाई परिवर्तन गर्ने समय! कालो एरोको साथ उपकरण (चयन उपकरण, V कुञ्जी) को रूपमा चयन गरियो, हामी आयतमा क्लिक गर्दछौं। हामी टूलबारको फेदमा दुई र colored्गीन बक्सहरूमा जान्छौं: अगाडि एउटा अनुरूप छ रंग भर्नुहोस् हाम्रो फिगर को, र एक पछाडि, TRAZO बुझाउँछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा हामीसँग सेतो रंग भरिने र सीमा रंग कालो हुनेछ। हामी भर्न बक्स र मा क्लिक गर्दछौं रंग छनौट गर्ने (र Color्ग पिकर) अब, तपाईं आफ्नो पृष्ठभूमिको लागि आफूले चाहेको रंग चयन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा यो निलो थियो। एक पटक छनौट भएपछि, ठीक क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो रंगीन आयत हुनेछ।
अब आउनुहोस् किनारा बन्द गर्नुहोस्। हाम्रो उपकरणपट्टीको किनारमा रहेको बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यस वर्गको तल मात्र, त्यहाँ रातो विकर्णको सानो सेता वर्ग छ। हामी यसमा क्लिक गर्दछौं ... र त्यो हो! यो वर्गले इलस्ट्रेटरलाई भन्छ कि हामी रंग बिना स्ट्रोक चाहन्छौं। यदि हामी आयातको रंग भरिन र without बिना नै चाहान्छौं भने हामीले सम्बन्धित बाकस चयन गर्नुपर्नेछ र खाली बक्समा फेरि क्लिक गर्नुपर्नेछ।
अर्को चरण भनेको हाम्रो पृष्ठभूमिमा गोलाकार ढाल बनाउनु हो। यो गर्नका लागि हामीले आवाश्यकता सन्झ्यालमा जानु पर्छ (यदि तपाईले आफ्नो स्क्रिनको दायाँपट्टि देख्नुहुन्न भने, मैले छविमा देखाउँछु भने तपाईको इलस्ट्रेटर विन्डोको माथिल्लो मेनूमा जानुहोस् र जानुपर्नेछ। सन्झ्याल> उपस्थिति)। यहाँ पूर्वनिर्धारित रूपमा, फिल विकल्प र the्गमा देखा पर्नेछ जुन हामीले आयत र स्ट्रोक विकल्प (स्ट्रोक वा समोच्च) मा सेट गरेको छ, जुन खाली विकल्पको साथ हुनेछ। एउटा अन्तिम विकल्प अस्पष्टता (अस्पष्टता) हो। त्यो विन्डोको तल, त्यहाँ दुईवटा सानो वर्गहरू छन्। एउटा धेरै फराकिलो कालो बोर्डरको साथ र अर्को पातलो बोर्डरको साथ। हामी ठीक एउटा चयन गर्छौं, गर्न को लागी नयाँ भर्नुहोस् (भर्नुहोस्)। अब हामी भर्ने नयाँ फिलको रंग स्क्वायरमा हामी क्लिक गर्दछौं। एउटा एर यसको दायाँपट्टि देखा पर्नेछ र हामी छनौट गर्नेछौं, सबै र samples्ग नमूनाहरू मध्येबाट, जुन गोलाकार कालो ढाँचा अनुरूप छ।
उपस्थिति विन्डो (उपस्थिति)
हामी नयाँ भर्दछौं (भर्नुहोस्)
गोलाकार ढाल स्विच चयन गर्दै
अब हामी फिलको बायाँ तिर एरोमा क्लिक गरेर नयाँ सेक्शन खोल्छौं र शब्दमा क्लिक गर्दछौं अस्पष्ट, हाम्रो भरिने लेयर लागू हुने तरीका परिवर्तन गर्न। त्यहाँ एक पटक, हामी विकल्प चयन ओवरले (ओभरल्याप)
हामी हाम्रो कागजातको मध्यमा सेतो वृत्त बनाउने छौं। यो गर्नका लागि, हामी उपकरण चयन गर्नुहोस् इलिप्स उपकरण, जुन आयत उपकरण "भित्र" हुन्छ। यो छनौट गर्न सक्षम हुन हामीले लामो प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, जारी नगरीकन, विकल्पहरू प्रदर्शन हुनको लागि कुर्दै। एक पटक तिनीहरू देखा पर्नेछन्, रिलिस नगरी, हामी हाम्रो कर्सरलाई इलिप्स टूलमा सार्दछौं र त्यसलाई छोड्छौं।
हामी उत्तम परिधि सिर्जना गर्छौं (यसको लागि हामी क्लिक गर्दछौं र तान्ने बेलामा किबोर्डमा सिफ्ट कुञ्जी होल्डिंग गर्दा)। सामान्य कुरा यो हो कि परिधि हामीले अघिल्लो ढाँचाको उही प्यारामिटरहरूसँग बाहिर आउँदछ जुन हामीले गरेका थियौं, त्यसैले हामीले भर्ने मानलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
अब हामी यसलाई केन्द्रमा जान्छौं। जाऊ त्यहाँ विन्डो> पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् र, सर्कल चयनित, छविहरूमा देखाइएका विकल्पहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी पाठ उपकरण चयन गर्दछौं (प्रकार उपकरण, key T) र हामी चाहेको पाठ टाइप गर्छौं। हाम्रो केसमा हामीले फन्ट रोज्यौं BadaBoom BB, जुन तपाईं डाफन्टबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ.
अब यसलाई अलिकता घुमाऔं। पाठमा ट्रान्सफॉर्म> दायाँ क्लिक गर्नुहोस् कपाल। हामी भर्टिकलमा मान introduceºº प्रस्तुत गर्दछौं र ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
हामी पाठलाई त्यस्तै प्रकारले केन्द्र गर्दछौं जुन हामीले सेतो घेरामा केन्द्रित गर्थ्यौं।
पाठ चयनितको साथ, हामी विकल्पमा जान्छौं वस्तु शीर्ष मेनूमा र चयन गर्नुहोस् विस्तार र, प्रदर्शन हुने विन्डोमा ठीक छ। त्यसो भए दायाँ क्लिक गर्नुहोस् पाठ मा र चयन रद्द Ungroup (समुह).
हामी यसमा फर्कौं उपस्थिति प्यानल। कालो फिल चयन गर्नुहोस् र आईकन 'मा क्लिक गर्नुहोस्।fx'छनौट गर्न पथ> अफसेट पथ। इन्सेट गर्नुहोस्, अफसेटमा, ppx। जोइनमा, राउन्ड। र मिटर सीमामा,।।
अब फेरि 'fx' प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् र छनौट गर्नुहोस् विकार र रूपान्तरण> रूपान्तरण र प्रविष्ट गर्नुहोस्:
मापन मा: क्षैतिज> १००% ठाडो> १००%
चालमा: क्षैतिज> ppx ठाडो> १२px
अब आउनुहोस् अर्को भरिने थप्नुहोस्। पातलो बोर्डरमा स्क्वायर आइकन ट्याप गर्नुहोस् र हल्का रंग चयन गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, सेतो।
हामी अर्को भरण थप्छौं। हाम्रो अवस्थामा, को सुन्तला रंग। हामी यसमा ट्रान्सफर्म प्रभाव थप्न जाँदैछौं। आइकनमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् 'fx' र डिस्टोर र ट्रान्सफॉर्म> ट्रान्सफॉर्म छनौट गर्नुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस्:
हामी यसमा कालो रूपरेखा राख्न जाँदैछौं। हामी यो चयन गर्दछौं स्ट्रोक मा कालो रंग र हामी यसलाई ppx दिन्छौं। तयार! अब फाइल बचत गर्न> सेभ गर्नुहोस्। .Jpg मा बचत गर्नका लागि, फाइल> निर्यात गर्नुहोस् (र त्यहाँ तपाईं ढाँचा चयन गर्नुहोस्)
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Illustrator » हास्य पाठ प्रभाव (एडोब इलस्ट्रेटरको लागि ट्यूटोरियल)
तपाइँको कर्पोरेट पहिचान को लागी ११ mockups
Free Free नि: शुल्क Bokeh बनावट यो क्रिसमस को उपयोग गर्न